VOLVO ARTICULATED HAULERS A40F
Model A35Fနှင့်A40F ၇ဲ. အစွမ်းသတိ၊ ကြာရှုည်ခံမူဧ။်ထူးခြားချက်လေးနဲ.မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းသက်သာစေယုံသာမက များပြားလှသောမြေကြီးတွေကို တခဏလေးအတွင်း သယ်ယူနိင်ပါသည်။ကြီးမားသော တာဝန်နှင့်ပြင်းထန်သော off- လမ်းကြောင်းနှင့်ကြာမြင့်စွာဝန်ဆောင်မူအတွက်မာကြောသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူ စက်တွေကိုလည်း အရည်အသွေး ကောင်းမွန်စွာ၊ယုံကြည် စိတ်ချရမူနှင့် ကြာရှည်ခံမူရှိအောင်ပြူလုပ်ပေးထားသောကြောင့် ပိုမိုထိရောက် လွယ်ကူစေပါသည်။မြေသယ်စက်နှင့်နောက်ဆက်တွဲယာဉ်တို.အကြားဆက်သွယ်မူကိုမြင့်မားပီး မြေပြင်ရှင်းလင်းေ၇းအတွက်စက်မူလုပ်ငန်း၊ဦးဆောင်ရေအားလျှပ်စစ်တို.ကိုလှည့်လို့ပြူလို့ရအောင် ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ ပြူပြင်ထိန်းသိမ်းလို့၇အောင် ထုပ်လုပ်ပေးထားပါသည်။
Brake (Disc &amp; Drum) Lathe Machine
Features: 1. Quickly, accurately and efficiently to cutting rotor. 2. Fast and slow setting allow cutting rotor. 3. Quickly, accurately and efficiently to cutting drum. 4. Finitely adjustably setting allow cutting drum. 5. Three kinds of speed 70, 88, 118 rpm to choose for spindle speed. 6. A convenient design allows to quickly change from rotor to drum, with cross feed extension plate will be increase the maximum rotor diameter to 22&#039;/588mm. 7. Position of stop make the lathe stop automatically after cutting. 8. Fully equipped with adapter package.
လှပခန့်ညှားပြီး လူကြိုက်များတဲ့ Johnson (ဂျွန်စန်) Click – 125 လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Auto Gear ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသွား ကျောင်းပြန်တဲ့ ညီ၊ ညီမလေးတွေ၊ ရုံးသွား ရုံးပြန်တဲ့ ကိုကိုမမတွေနဲ့ ဈေးသွား ဈေးပြန် ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ်တို့ရဲ့ အသည်းစွဲလေးပါ။ 125 CC အင်ဂျင်တပ်ဆင်ထားပြီး Air-Cooling system ပါလို့ အချိန်အကြာကြီးမောင်းနှင်ဖို့အတွက် စိတ်ချရပါတယ်။ LED မီးလုံးကြီးတွေရဲ့လှပခန့်ညားမှုနဲ့ အလင်းစွမ်းအားတွေကြောင့် ညအချိန် မှောင်မိုက်နေတဲ့လမ်းမှာ အန္တရာယ်ကင်းစွာ မောင်းနှင်ဖို့အတွက်အားသာချက်တစ်ခုပါပဲ။ နောက်ရှော့ဘားတွေကို အကြီးတွေတပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် တောင့်တင်းခိုင်မာမှုကလည်း အပြည့်ပါ။ အရောင် (၄) ရောင်လာပါတယ်။ ဖြူနက်၊ နက်နီ၊ နက်ရွှေနဲ့ ၀ါနက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
1/4&quot; Air Hose Pneumatic Dent Puller
After connecting the dent hammer to an air supply, the hammer createsavacuum and sucks firmly to the body - dents can now easily be removed by working the sliding hammer -3replaceable strainers: Ø 60 mm, 120 mm, 160 mm - 1500 g sliding hammer weight - 1/4&quot; air connection - air consumption: 0.7 cfm (20 l/min) - length: approx. 620 mm - working pressure: 90 to 150 psi (6.2 - 10.3 bar) - for best results even with the smallest adaptor an air pressure of at least 150 PSI is required !
The all terrain crane comprisesatelescopic boom mounted on an undercarriage with rubber tyres. The dual-cabin crane is capable of travelling on roads thus eliminating the need for special equipment to transport the crane. All terrain cranes have more even weight distribution, thereby rendering enhanced road-going performance and enabling lifting from multiple positions. In addition, all terrain cranes are fitted with versatile steering capability to allow manoeuvring of their extended chassis with ease.
760000 ~ 820000 Kyats
ကျောင်းဖွင့်ချိန်ကာလဖြစ်သောကြောင့် Rato ဆိုင်ကယ်အသစ်နဲ့ ကျောင်းတက်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးပါ။ အင်ဂျင်အမျိုးအစား (၁၁၀) ဖြစ်ပါသည်။ ခရီးကြမ်းတွင်ရုန်းကန်အား ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဆိ်ုင်ကယ်၏အားသာချက် အင်ဂျင်ငြိမ်သက် မူရှိခြင်း၊ဂီယာအဆင့်(၄)ဆင့်ပါဝင်ပါသည်။သက်သာငြိမ့်ညောင်းမူရှိပြီး စီးလို့ကောင်းပါသည်။ ဆီစားနူန်းသက်သာမူရှိပါသည်။
Ventilation Fan (Agriculture Fan) Product Type: Ventilation Fan (Agriculture Fan) Structure: Agriculture Fan AF series made from the high grade material the casting from galvanizes. Impeller : Galvanize, Stainless Steel or Aluminium Size : 30 inch, 36 inch and 50 inch Model : E series - Non border Non Shutter, use for transfer air N series - Border Non Shutter, use for supply air C series – Border and automatic Shutter, use for exhaust air Air Volume : 30” Maxinium : 16,350 cmh 36” Maxinium : 22,300 cmh 50” Maxinium : 40,850 cmh Motor : 0.37 – 1.1 kw (1 phase and3phase) Application : Agricultural Farm, Ware House, Green House, Building Chicken Farm, Sporting Hall, Car Park
FEATURE Smallest starting toque and small starting current Better power factor, enhanced effciency, and excellent operation Restricted to applications in private homes and offices owing to small capacity Low noise and vibration APPLICATION Suitable for use on fans , Blower Scrapers coconut
Wonjan CBR motocycle
1400000 ~ 1450000 Kyats
Wonjan CBR motocycle သည် လူငယ်အကြိုက် ခရီးဝေးသွားလာခြင်းအတွက် ကောင်းမွန်သော အမျိုးအစား တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဆီစားနူန်းသက်သာစေပြီး သွားလာရကောင်းမွန်သော မော်တော်ဆိုင်ကယ် အမျိုးအစားကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အင်ဂျင်(၁၅၀) ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် အချိန်ကုန်ခြင်းကိုသက်သာ စေပြီး ညမှောင်မီးရောင် ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာ မြင်နိုင်ပါသည်။
The mobile crane comprisesatelescopic boom mounted on an undercarriage with rubber tyres. The dual-cabin crane is also capable of travelling on roads and uses outriggers and counterweights for increased stability during lifting.
FEATURE Performance-approved electromotor Motor with aluminum casing 8m high-pressure hose Low pressure detergent injector Professional trigger gun with safety lock In-line water filler Water inlet hoseconnector Pressure adjustable Out-returning unloader 3m cable APPLICATION Use cleaning dust or dirt in the area Use cleaning car , machine Use cleaning parking , pool and factory
လက်နဲ. လှည့်စရာမလို အလွယ်တကူ ဆွဲထုတ်နိုင်မယ့် ကားချိုင့် စုပ် ပစ္စည်းလေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ။ Products List : ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ ----1pc Gold Glue Puller ----10pcs Red Glue Tabs ----25pcs Blue Glue Tabs ဈေးနှုန်း - 90000 kyats (PreOrder) Delivery free in Yangon ၂ ပတ်စောင့် ရပါမယ်။ ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
FEATURE Product Type: Axial Tube Fan (Belt drive) Pressure : Low Pressure Special Constructions: Drum of pressed sheet steel with one flange (PL) or with double flange AM AL ALc) bored for anchorage to walls or between pipings, complete with plate for supporting the control motor. Die-casted rotor in light alloy (sparkproof) with blades with winged profile, dynamically balanced. Assembled overhung on the motor’s shaft. The inclination of the rotor’s blades is adjustable when the fan is stopped from the types 710 up to 1400. The direction of the air is from the motor to the rotor (clockwise direction seen from the motor). It is always possible to invert the airflow, i.e. from the rotor to the motor, by inverting the motor’s rotation, this is done by disassembling the rotor and reassembling it overturned APPLICATION The Axial fans are suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works. For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures. Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 300 °C. Air Volume: 80-1100 m3/min St. Pressure: 4-70 mmH2O Impeller Dia (mm): 400-1000